Cabashada shirkada diyaaradaha ee Flydubai ma gar baa? | ToggaHerer
← Daawo: ” Suldaan Wabar Gadabuursi Xoree & Dad Dil uma dooran…Hogaan-dhaqameedka ibriil yoonis (Gadabuursi)” MAdaxdhameedka Jibriil Yoonis oo ka soo horjeestay Suldaan Wabar
Daawo: ” Gudoomiyihii Kumeel Gaadhaka ahaa Waakaa hadlay… Gudoomiyihii Wadani ee UK Cidla ayuu gaardiyayaa oo lamabuu socon arimaha Siyaasdii wanina waataas uu gudoomiye Jirde idiinka waramay Balaayaduna maanta waa Gobolan oo ehel ma laha” Faysal Cali waraabe →
Cabashada shirkada diyaaradaha ee Flydubai ma gar baa?
Published on November 4, 2019 by Oday
Subaxdaa waxaan arkay diyaaradan oo ku dul wareegaysa garoonka ka bacdina u jihaysatay waqooyi. Waan fahmay in la wareejiyey (diversion), hase yeeshee may jirin meel aan ka xaqiijin karo wareejintaa, maadaama Garoonka iyo Hay`ada duulista midkoodna aanuu lahayn Website ama Blog lagu soo bandhigo laguna baahiyo macluumaadka, isla markaana aanay social mediaha ama baraha bulshada ee wararka iyo macluumaadka la isugu gudbiyo sida Twitter, Facebook aanay Garoonka iyo Hay`ada midkoodna lahayn.
Waxaan is weydiiyey muxuu ahaa macluumaadkaa khaldan ee la siiyey diyaaradu? Yaa siiyey ama bixiyey macluumaadkaa? Wakhti intee leeg ayaa u dhaxeeyey markii warbixinta cimilada la diyaariyey iyo markii loo gudbiyey diyaarada? Ceeryaanta iyo daruuraha sababay wareejinta diyaarada, maamulka garoonku ma eed buu ku leeyahay? Masuulkii (Supervisor) qaybka diyaarada laga hago (Tower) joogay ama hagihii (Air Traffic Controller) shaqada ku jiray ee xidhiidhka la samaynayey diyaaradu ma guydbiyey xaalada dhabta ah ee cimilada (Daruur, Ceeryaan, Dabayl, iwm) ee markaa ka jirtay garoonka iyo dhabaha (Runway) diyaaradaha? Wareejinta diyaaradu ma khasab ayey ahayd mise ikhtiyaar? Shaqaalihii xirfada iyo aqoonta lahaa ee dhowaan shaqada uu ka fadhiisiyey Maareeye Rodol, ma la odhan karaa kaalintii ay baneeyeen ayaa keentay baylahdan iyo ceebtan hadda soo baxday? Su`aalahaa iyo kuwa kaleba waxa si dhab ah uga jawaabi kara cida u xog ogaalka ah dhacdadaa oo ah Maamulka Madaarka iyo Masuuliyiinta Hay`ada Duulista, balse aan kalmad kooban ka idhaahdo dhacdadan.
Hadaba, haddii ay ceeryaamo iyo daruuro dul hoganayeen garoonkii Hargeisa, qalab casri ah oo lagu ogaado ama lagu saadaaliyo cimiladuna aanuu oolin, ku darsoo garoonkuna aanuu lahayn qalabka sahla soo degitaanka diyaaradaha ee ILS, diyaaradiina ayba soo dhaw dahay (approach) xalku muxuu noqonayaa?? Mar haddii xogta cimilada jirtay loo gudbiyey duuliyaha oo Air Traffic Services teamka ama Air Traffic Controllersku ay ugu gudbiyaan Radioga, masuuliyadu waxay saaran tahay duuliyaha isaga ayaana go`aan ka qaadan kara xaalada iyo waxa uu yeelayo. Waxa u furan inuu garoon kale u wareego (diversion). Waxa uu kari karaa inuu muddo kooban ku dulwareego garoonka (haddii shidaalku ku filan yahay) isaga oo naawilaya in aragtidu wanaagsanaato ama ceeryyaantu yaraato. Waxa uu yeeli karaa inuu isku dayo degitaan isaga oo maanka ku haya badqabka dadka iyo diyaaradaba (safety). Waa go`aan qaadasho culus. Sida muqata duuliyihhii waday diyaaradaasi waxa uu doorbiday inuu ku dago Djibouti oo halkaa ku baxnaaniyo inta ay cimiladu wanaagsanaanayso.